एसिया कप छनौटमा कुन देश कुन समूहमा ? – Hotpati Media
एसिया कप छनौटमा कुन देश कुन समूहमा ?
११ माघ २०७३, मंगलवार ०६:१२ मा प्रकाशित (3 बर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ३ मिनेट
काठमाडौं – एसिया कप छनौटमा सोमबार गरिएको ड्रअनुसार नेपाल कठिन समूहमा परेको छ । समूह ‘एफ’मा नेपालसँगै यमन, ताजकिस्तान र फिलिपिन्स रहेका छन् ।
यूएईको अबुधाबीमा भएको एसिया कप छनौटको ड्रमा नेपालले यमन, ताजकिस्तान र फिलिपिन्सलाई प्रतिस्पर्धी पाएको हो । ग्वामले नाम फिर्ता लिएपछि एएफसी सोलिडारिटी कपको विजेता भएको नाताले एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले नेपाललाई एसिया कप छनौट खेल्ने मौका दिएको हो ।
नेपाल रहेको समूहमा परेका फिलिपिन्स फिफा वरियतामा १२२ औं स्थानमा, ताजकिस्तान १ सय ३२ औं स्थानमा र यमन १४९ औ स्थानमा छन् । नेपाल भने १ सय ७५ औं स्थानमा छ ।
खेल होम एण्ड अवेका आधारमा हुनेछन् । नेपालले पहिलो खेल आगामी मार्च २८ मा फिलिपिन्ससँग फिलिपिन्समै खेल्नेछ । यस्तै दोश्रो खेल जुन १३ मा यमनसँग नेपालमा हुने छ । तेश्रो खेल सेप्टेम्बर ४ तारिखमा ताजिकिस्तानसँग नेपालमा हुने छ । चौथो खेल अक्टुबर १० का दिन ताजिकिस्तानसँग उसकै घरेलु मैदानमा हुने । पाँचौ खेल फिलिपिन्ससँग नोभेम्बर १४ का दिन नेपालमा हुने छ । अन्तिम खेलमा नेपालले यमनसँग उसकै घरेलु मैदानमा खेल्ने छ ।
अन्तिम चरणको छनौटमा २४ टिम छन् । चार-चार टिमको ६ समूह बनाइएको छ । प्रत्येक समूहको शीर्ष दुई टिम एसियन कपमा छनोट हुनेछन् । डिफेन्डिङ च्याम्पियन अस्ट्रेलिया, जापानलगायत विश्वकप २०१८ मा एसियाली छनौटको अन्तिम चरणमा पुगेका १२ देश यसअघि छानिइसकेका छन् ।
विश्वकप छनौटका लागि मेसी खेल्न सक्ने ः अर्जेन्टिना